१५ ओटा विकास बैंकको तेस्रो त्रैमासिक वित्तीय विवरण सार्वजनिक, क – कसले कति कमाए नाफा ? – OnlinePahar
विजनेश समाचार स्वास्थ्य
२८ माघ २०७७, बुधबार १३:४७ Basanta Khanal	0 Comments	bank
वैशाख १८, काठमाडौं । १५ ओटा विकास बैंकले चालू आवको तेस्रो त्रैमासिक वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेका छन् । उक्त वित्तीय विवरण अनुसार उक्त अवधिसम्ममा ती बैंकहरुमध्ये सवैभन्दा बढी नारायणी डेभलपमेण्ट बैंक नोक्सानमा रहेको छ भने बाँकी १४ ओटा बैंकहरु नाफामा छन् । सार्वजनिक वित्तीय विवरण अनुसार १४ ओटा बैकले कुल रू. ४ अर्ब ७८ करोड ८८ हजार नाफा आर्जन गरेका हुन । गत आवको तेस्रो त्रैमासमा १४ ओटा बैंकहरुले रू. २ अर्ब ५७ करोड ५४ लाख नाफा आर्जन गरेका थिए । नारायणी डेभलपमेण्ट बैंकले चालू आवको तेस्रो त्रैमाससम्मा रू. ५२ लाख ५४ हजार नोक्सानी व्यहोरोको छ । गत आवको तेस्रो त्रैमासमा पनि कम्पनी रू. १० लाख ९९ हजार नोक्सानी थियो ।
सबैभन्दा बढी मुक्तिनाथ विकास बैंकले नाफा कमाएको छ।उक्त कम्पनीले चालू आवको तेस्रो त्रैमाससम्ममा रू. १ अर्ब ५६ लाख नाफा आर्जन गरेको हो । कम्पनीले गत आवको तेस्रो त्रैमासमा रू. ६७ करोड ६० लाख नाफा कमाएको थियो । गत आवको तुलनामा चालू आवमा कम्पनीको नाफा ४८ दशमलव ७५ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो । १५ ओटा कम्पनीहरुमध्ये सबैभन्दा बढी वितरणयोग्य नाफा र प्रतिशेयर आम्दानीमा पनि मुक्तिनाथ विकास बैंकको रहेको छ । उक्त अवधिसम्ममा कम्पनीको वितरणयोग्य नाफा रू. ८२ करोड ८७ लाख रहेको छ भने प्रतिशेयर आम्दानी रू. २७ दशमलव ८७ पुगेको छ ।
एनएफआरएस प्रणाली अनुसार कम्पनीले आर्जन गरेको खुद नाफालाई बिभिन्न शिर्षकमा छुट्याएपछिको नाफानै वितरणयोग्य नाफा हो । यही नाफाबाट कम्पनीले शेयरधनीलाई लाभांश वितरण गर्ने गर्दछन् । वित्तीय विवरण प्रकाशित गरेका १५ ओटा बैंकमध्ये कर्पोरेट डेभलपमेण्ट बैंक र ग्रीन डेभलपमेण्ट बैंकले भने वितरणयोग्य नाफा उल्लेख गरेका छैनन् ।
← सिईडिबि पछि अर्को कम्पनीको आइपियो निस्कासन हुदै (मिति सहित)
अस्पताल जान समस्या भएकाे छ ? निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा सुरू (फोन नम्बरसहित) →